Fakafaka: aman-jato taona, mitady ny very ihany | NewsMada
… Ka ilay izy ange misy tokoa fa tsy fantatra e! Ary rehefa tsy fantatra, tsy iainana… Naman’ny tsy misy ihany izany! Mety mahatsikaiky ny sasany ny mieritreritra ireo voalaza ireo kanefa tranga fahita ao anatin’ny fiainan’ny Malagasy tokoa ny tsy fahafantarana ny kolontsainy sy ny zavakantony ary ny fomba amam-panaony. Andaniny, tsy ifanomezan-tsiny ny tahaka izany. Ankilany, nanao fahadisoana goavana ny teo aloha. Raha mba nampitainy sy nampiaininy amin’ny kolontsainy sy ny zavakantony ary ny fombany mantsy ireo taranany aty aoriana, tsy ho tahaka izao ny niafarany. Tsy ho mpanindraindra ny an’ny hafa. Tsy mpindrana ny an’ny sasany, sns.
Fa ny tena zava-doza, maharitra ela loatra ny vanim-potoan’ny mitady ny very, ho an’ny Malagasy. Efa hikasika ny 100 taona mahery, mbola mitady ny very ihany. Tsy hain’ny Malagasy ve ny mitady ny azy very fa toa ny an’ny hafa indray no hitany bebe kokoa? Sa ve, ireny an’ny sasany ireny no nolazainy fa ilay azy very? Izany hoe, tsy fantany sy tsy hainy akory ny manavaka ny kolontsainy sy ny zavakantony ary ny fombany amin’ny an’ny hafa. Izany ve tsy azo lazaina hoe, mpangalatra? Sa, mangalatra noho ny tsy fahalalana?
… Raha mbola ny fotoana hitadiavana ny very no mitana anjara toerana lehibe eo amin’ny Malagasy, ho alina andro eto. Mila sy mitaky asa avy hatrany ny fanarenana sy ny fanotofana ny lavaka mangitsokitsoka nivarinan’ny kolontsaina sy ny zavakanto ary ny fomba amam-panao malagasy. Tsy hay ny fomba, izay manam-pahalalana, aoka hampianatra izany. Tsy hay ny zavakanto, ianaro! Toraka izany hatrany…
… Sa ve tsy vita izany raha tsy misy fanampiana avy any ivelany?